Cayaaraha FA Cup ee wareegga 3-aad - BBC News Somali
Cayaaraha FA Cup ee wareegga 3-aad
10 Jannaayo 2011
Image caption Steven Gerrard oo calaamadda guduudan loo taagay
Manchester United waxay gool rigoore ah oo bilowgii cayaarta uu dhaliyay Ryan Giggs ayay kaga adkaatay kooxda Liverpool.
Liverpool, waxaan nus saac markii cayaartu ay socotay laga saaray oo calaamadda guduudan qaatay laaciibkooda la dhihi karo waa cayaaryahanka ay Liverpool ku tiirsan tahay Steven Gerrard kadib markii uu fal loo arkay in uu qatar yahay kula kacay cayaaryahan kooxda Man U.
Man U waxay sidaas ugu gudubtay wareegga afaraad.
Liverpool, waxaa horkacaya tababare cusub Kenny Dalglish kadib markii uu ka tagay tababrihii Roy Hodgson oo intii uu tababaraha ka ahaa kooxda guulo badan aysan soo hoynin.
Waxaa kooxda Liverpool ka badbaadiyay in goolal badan looga badiyay goolhaye Pepe Reina oo xaqiijiyay in aan shabaqa Liverpool kubad dambe taaban iyadoo uu badbaadiyay goolal badan.
Hadaba, hadaba hadii kooxda hogaanka u haysta tartanka England Permier League ay ka gudubtay wareegga 3-aad ee tartanka FA cup, Man U iyo Arsenal oo ku soo xiga dhinaca hogaaminta Permier League xagee xaalkoodu marayaa?
Arsenal oo cayaartay Sabtidii, waxay ka adkaan waysay kooxda Leeds oo ugu timid garoonka Emirates. Waxaaba mar ay ku sigatay in tartanka laga reebo kadib markii gool rigoore ah oo daqiiqadihii hore laga dhaliyay ay soo gudi waysay ilaa laga gaaro waqtigii gabagabo, iyadoo taageerayaasha Arsenal ay quus taagan yihiin ay heleen iyaguna rigoore uu shabaqa ku hubsaday cayaaryahanka qadka dhexe ee Arsenal captain-ka Cesc Febregas. Cayaartuna ay 1-1 ku dhamaatay.
Arsenal fursad ay toos ugu gudbi lahayd wareegga afaraad kama faa'iidaysan, oo cayaar kale ayay Leeds kula cayaaraysa garoonkeeda, maalinta Talaadada ah ee 18-ka January, taasoo natiijada wax walba laga filan karo.
Man City v Liecester
Image caption Man City
Manchester City ayaa iyaduna la mid ah Arsenal, oo waxay ka badin waysay kooxda Leicester oo ay gurigeeda ku booqatay.
Waxayse Manchester City kaga fursad fiican tahay Arsenal kooxda Leicester waxay iman doontaa garoonka Man City.
Liecester iyo Man City goolal badan ayay kala dhaliyeen ilaa afar gool.
Goolashu waxay ahaayeen sida kaltan oo kale oo marba koox gool intay ku hormartay laga soo gutay.
Daqiiqadii koowaadba markii cayaartu bilaabatay Leicester gool ayay ka dhaliyay Manchester City, waxaana meel hoose oo shabaqa bartankiisa ah ku hubsaday Souleymane Bamba oo kubadda ka helay gudaha xariiqinta goolhayaha ee lixda yaardi.
Man City ayay ku qaaday muddo in yar ka badan labaatan daqiiqo in ay iska soo guddo goolka Leicester, oo cayaaryahanka James Milner ayaa daqiiqadii 23-aad kubadda oo uu ka helay meel bannaanka ka ah xariijinta rigooraha kadibna geeska hoose ee bidixda ka xareeyay kubadda. Waxay cayaartu noqotay 1-1.
Balse sidaas laguma kala harin, oo Man City waxayba sii dardargalisay dadaalkeeda ilaa ay ka hesho gool labaad, Waxaana uu ahaa kubad uu Carlso Tevez meel u dhow goolka ka dhaliyay iyadoo uu dhigay dhinaca geeska midigta hoose. Waxaa ay ahayd daqiiqadii u dambaysay ee waqtiga nasashada, oo lagu kala maray 1-2 ay Leicester laga horeeyay oo Man U ku hogaaminayso.
Isu soo laabashadii qaybta labaad ayaase keentay in kooxda martida loo ahaa ay boorka iska jaftay, fursadna u heshay in ay iska soo guddo goolka laga horeeyay. Cayaaryahanaka Andy King, ayaa kubad uu ka helay gudaha xariiqinta lixda yaardi wuxuu geeska goose ee bidixda ah ka glaiyay goolka. Cayaartu waxay noqotay 2-2 daqiiqadii 64-aad. Ugu dambayntiina natiijadaas ayay ku soo gabagabowday Liecester 2 Manchester United 2.
Labadan koox waxay ku qasban yihiin hadda in mar kale ay is arkaan si middood ay u adkaato uguna gudubto wareegga afaraad ee tartanka FA cup-ka.
Image caption Cayaaryahan Defoe 2 gool ayuu u dhaliyay Tottenham.
Isla tartanka kooxda Tottenham, waxay 3-0 ugu awood sheegatay kooxda Charlton kadib markii ay isku heleen garoonka white Hert Line.
Gooldhalinta waxay bilaabatay qaybtii labaad ee cayaarta. Cayaaryahanka Andros Twonsend oo qadka dhexe ka cayaara ayaa daqiiqadii 49-aad bilaabay gooldhalinta. Qiyaastii toban daqiiqo kadib uu weeraryahanka Jermain Defoe uu goolka labaad uu dhaliyay, laba daqiiqo kadibna isla Defoe ayaa u sadexeeyay Charlton.
Tottenham toos ayay ugu gudbaysaa wareegga afaraad.
Chelsea ayaase ku caro-furatay kooxda Ipswich. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa guuldarooyin isdaba joog ah ama barbardhacyo ay Chelsea kala kulanto kooxo dhowr ah tartanka England Permier League taasoo keentay in ay wayso fursadii ay kaga mid noqon lahayd kooxaha horkacaya tartanka. Hadda Man U oo hogaaminaysa tartanka ayaa ka horaysa ilaa 9 dhibcood.
Image caption Chelsea 7-0 ayay kaga badisay Ipswich
Goolasha Chelsea ay ka dhalisay Ipswith waxay bilowdeen daqiiqadii 33-aad markii uu goolka koowaad Chelsea u dhaliyay cayaaryahankooda Salomon Kalou, isla daqiiqadii 33 ilbiriqsi kadib waxaa Ipswich u labeeyay Daniel Sturridge.
Kadib goolashu maba kala joogsan ilaa Chelsea ay ka dhaliso Ipswith 7 gool, iyaguna ay waxba dhalin waayaan.
Goolasha kale waxaa kala dhaliyay laba uu dhaliyay Lampard, mid uu dhaliyay Anelka, gool uu dhaliyay Edwards iyo Sturridge oo gool kala dhaliyay.
Chelsea toos ayay ugu gudubta wareegga afaraad ee tartanka FA cup.
Waxaase su'aashu tahay Chelsea maxay kula soo laabanaysaa tartanka England premier League. Boorka miyay iska jafi doontaa mise goolashii tirada badnaa ee tartanka ay ku bilowday ayay hadana dib u soo celin doontaa? Waa loo joogaa wax walba oo ay la soo shir tagto. Tijaabadeeda ugu horaysana waa maalinta Sabtida ah ee soo socota 15-ka bishan oo ay garoonkeena Stamford Bridge ku martigalinaysaa kooxa Blackburn.